Beesha Mareexan oo kaso horjesatay heshiiski Galmudug iyo Ahlusunna (AKHRISO) – Shacabka News
Beesha Mareexan oo kaso horjesatay heshiiski Galmudug iyo Ahlusunna (AKHRISO)
Beesha Sade (Mareexan) oo kamid eh beelaha ugu balaaran beelaha ku midoobay maamulka Galmudug aya la shegaya in eey kaso horjesatay heshiiski u dhexeyay Dowlad Goboledka Galmudug iyo Maamulka Ahlusunna taasi oo labada maamul eey ku midooben.
Beesha aya la sheegaya in eey dhaliil santahay in Sh Maxamed Shakir uu noqdo Wasiirka koowad ee Galmudug taasi oo u dhiganto Raisul Wasare wexeyna ku andaconayan in awoodi Madaxweyne Ku Xigenka Galmudug Maxamed Xashi Carabeey eey wiiqeyso uuna noqonayo masuulka sedexaad ee u sareyo maamulka Galmudug wexeyna carab dhabeen in xilkasi uusan u cuntamin Beeshoda.
Beesha Hawiye aya heyso xilalka Madaxweynaha , Wasiirka koowad , Guddomiyaha Baarlamanka iyo Guddomiyaha Maxkamada Sare wexeyna dadka siyasada falanqeyo ku tilmaamen in awood qeybsiga Galmudug eeysan sidas ku haboneyn eeyna dhalin karto kala fogansho siyasaded oo horleh.
Geesta kale siyasiyinta iyo Xildhibanada kaso jeedo Beesha Sade oo Xalay madaxtoyada kulan casho eh kula yeshay Madaxweynaha Soomaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo aya laso warinaya in eey ku eedeyen in heshiiskan uu isaga garwaden ka aha balse Farmaajo aya cabashada beeshisa iska indha tiray waxana lagu sababeyay in uu ka fogaanayo in uu beshiisa u eexdo isago doonayo midnimo Soomaliyed iyo in Galmudug eey hesho xasiloni siyasaded.
Isku soo wada duubo Beesha Mareexan ay dagto waqooyiga Galgaduud hadi eeyna ka baxan maamulka Galmudug wexey noqoneysa jahwarer siyasaded oo horleh oo ka curato gobollada dhexe Soomaliya.
Author Cabdirahman AhmedPosted on 07/12/2017 07/12/2017 Categories DHAGEYSO WARAYSIYO, VIDEO, WARARKA MAANTA
Previous Previous post: SAWIRRO: Diyaar Weyn oo Dalka Sucuudiga Laga Leeyahay oo Hada Muqdisho ka Dagtay, Maxay Wadaa? (AKHRISO)
Next Next post: Xamaas oo CARABTA ugu baaqday inay joojiyaan Khilaafkooda oo u midoobaan Israel.